Ungakusiza kanjani ukulungiselela isampula - i-Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Ungakusiza kanjani ukulungiselelwa kwesampula "
Emsebenzini welebhu yansuku zonke, ukulungiswa kwesampula inqubo lapho isampula iphathwa ngaphambi kokuhlaziywa kwayo. Ama-homogenizer we-Ultrasonic ayithuluzi elithembekile nelinamandla lokulungisa amasampula ngaphambi kwezinyathelo ezijwayelekile zokuhlaziya ezifana ne-chromatography (isib. GC, LC, UPLC, IC), i-mass spectrometry (isb. GC / MS, TD GC-MS, LC / MS), microscopy ( isb SEM, TEM), ukuhlaziywa komhlaba (isb. SEM, TEM, EDX, XRD, FTIR), amasu wokuhlaziya okuyisisekelo njll.
Ama-Ultrasoniator afeza imisebenzi yokulungiselela isampula ejwayelekile njengokufaka ama-solids noketshezi, ukukhipha uketshezi olukhona kabili noma ngaphezulu, ukusabalalisa izimpuphu, ukugaya ama-nanoparticles, ukukhishwa kwamakhompiyutha we-bioactive noma ukuhlaziya, ukukhipha kanye nokusabalalisa amasampula njll ngokushesha nangokuthembekile.
Njengoba amadivayisi we-Hielscher ultrasonic angalawulwa ngokuqondile, yonke imiphumela ye-sonication iyatholakala kabusha. Ngaphezu kwalokho, yonke imiphumela etholwe nge-ultrasonical ingalinganiswa ngokuqondile ibe ngamanani amancane noma amakhulu. Lokhu kusiza ukwenziwa kabusha kokulungiswa kwesampula kanye nemiphumela yokuhlaziya kakhulu.
I-Hielscher Ultrasonics yakha ama-homogenizer ahlukahlukene we-lab ultrasonic afana namadivayisi aphethwe ngesandla futhi agxiliwe, i-VialTweeter ye-sonication kanyekanye engaqondile engaqondile yokufika ku-vials engu-10 ngaphandle kokuzingcolisa noma i-SonoStep, iyunithi lokulungiselela isampula elihlanganisa i-sonication, ivuselele futhi ingene ngamandla uhlelo oluyinkimbinkimbi. Isikrini sokuthinta esidijithali, i-SD ehlanganisiwe yedatha yokuzenzakalelayo nokukhanyisa isampula iqinisekisa ubungane bomsebenzisi nenduduzo.
Funda kabanzi mayelana nokuthi ukulungiswa kwesampula ye-ultrasonic kungawenza kanjani umsebenzi wakho welebhu nsuku zonke!